पुरुषलाई मात्रै दोषी ठहराउने समाजले महिलाले हद पार गरेको कहिले देख्ने ? - Sidha News
पुरुषलाई मात्रै दोषी ठहराउने समाजले महिलाले हद पार गरेको कहिले देख्ने ?
श्रीमान श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। जब रथको कुनै एउटा पाङ्ग्रामा समस्या आउँछ त्यो रथको यात्रा अनिश्चित हुन्छ। एक सिक्काका दुई पाटा पनि हुन् श्रीमान श्रीमती। हामीले सामान्य बुझ्दा पनि जब एक सिक्काको एक पाटामा खत आउँछ सायद त्यो सिक्का बजारमा चल्दैन।
श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा प्रतिकात्मक कुराहरु अरु पनि छन्। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई नङ र मासुको सम्बन्ध पनि भनिन्छ। नङ र मासु छुटिनु पर्दाको पीडा त स्वयं व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। जसको छुटेको हुन्छ। नङ र मासु छुटिएर नयाँ नङ पलायो भने पनि पहिलेको जस्तो हुँदैन।
कतिपय मानिसको जीवन एक्लो अवस्थामा फूल जस्तै हुन्छ। कतिपयको जीवन विवाहपछि फूलजस्तै हुन्छ। मान्छेको जीवनमा आउने अर्को व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै भरपर्छ। ‘फूल पहिलामात्र सुन्दर भविश्यको परिकल्पना गरी अग्निलाई साक्षी राखेर कसम खाएका आदर्श शर्मा (नाम परिवर्तन) ले उदास हुँदै आफ्ना पीडा पोख्दै थिए।
राजधानीको आसपासमा घर भएका उनी उज्वल भविष्यको कल्पना गरि ५ बर्ष भन्दा बढीे समय खाडी मुलकमा बिताएको बताउँछन्। ‘खाडीको चर्को घाममा राम्रो कमाइ गरेर उज्ज्वल भविश्य बनाउने परिकल्पना गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको प्रवेशले जीवन, खुशी, रहर सबै लुट्यो। उनले मलाइ कहिलै आफ्नो ठानिनन्।’
सँगै जिउने मर्ने कसम खाएर पञ्चेबाजा बजाउँदै घर भित्र्याएकी श्रीमती घरभित्र खुसी नहुँदा कसको पो मन नदुख्ला। ‘कसलाई रहर हुन्छ र? आफ्नो श्रीमती खुसी नभएको हेर्ने,’ आदर्शले भने, ‘समाजमा देखावटीको लागि मुसुक्क हाँस्ने श्रीमती घर भित्र कहिल्यै खुशी भइनन् उनी। उनको क्यारेक्टर खत्तम थियो,’ आदर्शले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि म र मेरो परिवार चुप थियौं।’
विवाह गरेको ९ महिनामा नै सम्बन्ध बिच्छेद गर्न बाध्य रहेका उनले बिदेशबाट फर्किएको हप्तामा नै आफन्तले खोजेको स्त्रीसँग बिबाह गरेका थिए। आफ्नो किस्मतलाई दोष दिने आदर्शले आफूमाथि परेको बज्रपातको भागिदार कसैलाई सम्झिएनन्।
‘किस्मत खराव भएपछि कसलाई दोष दिनु र?,’ उनले भने, ‘अगाडिको बिषयलाई भुलेर अब नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न समेत प्रस्ताव गरेको तर उनले मानिनन्।’
‘विवाह पश्चात् पनि पटकपटक पुरानो प्रेमीलाई भेट्न जान्थिन्, त्यति मात्रै होइन उनलाई उनको प्रेमिले केही भनिदिए भने घरमा ल्याएर वाइन पिइदिने।’ समाज र परिवारको लागि सबै पीडा मुटुभित्र दबाएका आदर्श पटकपटक मरेतुल्य भएर बाँच्न बाध्य भएको समय सम्झन्छ्न। ‘हाम्रो परिवारमा विवाह पश्चात् यस्तो व्यवहार गर्ने पहिलो महिला भित्रेकी थिइन,’ उनले भने।
‘एकदिन प्रेमीसँग फोनमा झगडा भएको सुनिरहेको थिएँ मैले, केही बेरमा उनले बिष पिइदिछिन्,’ आँखा भरी आँसु पार्दै सम्झिए ती दिन। ‘श्रीमतीको परिवारले कुजात प्रेमी भन्दै मसँग विवाह गराएका रहेछ्न,’ उनले भने, ‘परिवारको जबर्जस्तीमा विवाह गरेकी उनले विवाह अगाडि पनि पटकपटक आत्माहत्याको प्रयास गरेकी रहिछन्।’
आदर्श यो समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जसले एक खराब महिलाको लागि आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन पर्यो। आदर्शको अनुहारको आदर्श सबै गुमिसकेको छ। सधैं पुरुषलाई मात्रै दोषी ठहराउने हाम्रो समाजले महिलाले हद पार गरेको कम नै देख्छन्।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो सम्बन्धमा रहन सकिन्छ? महसुस गरौं।’ डिभोर्स मागिन् नदिएर शुख पनि थिएन, डिभोर्स दिँदा उनले मागेको रकम दिनुपर्ने बाध्यता किन? हाम्रो देशको कानुन कस्तो?-डिसी नेपालबाट